Last Seen Alive – Gold Channel Movies
He'll stop at nothing to get her back.May. 19, 2022Unknown95 Min.R
Action, Thrillerမှကြိုက်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ရှာပုံတော်မင်းသားကြီးလာပါပြီ!!
ဝေလ်နဲ့လီဆာတို့လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားမှာ ပြသနာလေးတစ်ခုရှိနေပါတယ်၊ အဲဒီပြသနာကြောင့်ပဲ စကားများခဲ့ကြရာကနေ လီဆာက သူ့မိဘအိမ်ကို ပြန်နေမယ်တကဲကဲဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတော့ ဝေလ်တစ်ယောက် လီဆာစိတ်တိုင်းကျ သူ့မိဘအိမ်ကိုပြန်လိုက်ပို့ပေးခဲ့ရပါတယ်၊အဲဒီ အပြန်လမ်းမှာပဲ ဒီအဖြစ်ကြီးနဲ့ကြုံခဲ့ရတာပါ။ဝေလ်တစ်ယောက် လမ်းက ဓာတ်ဆီဆိုင်မှာ ဆီ၀င်ဖြည့်နေတဲ့အချိန် လီဆာကလည်း ရေ၀ယ်ဖို့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်၊ ‌ရေ၀ယ်သွားတဲ့‌လီဆာက ပြန်ရောက်မလာတဲ့အခါမှာတော့..
လီဆာတစ်ယောက်ဘယ်ကို ရောက်သွားတာလဲဝေလ်ကရော သူ့ဇနီးကို ဘယ်လိုရှာမှာလဲပြန်ရော ရှာတွေ့ပါ့မလားဆိုတာကိုတော့ မင်းသားကြီးGerard Butlerနဲ့မင်းသမီးJaimie Alexanderတို့ရဲ့ Last Seen Aliveမှာပဲ အဖြေရှာကြည့်လိုက်ပါဦး၊
Reviewed By Monn
Translated By Monn, C’mon & MaryChrist
Download G Drive HD 720p Myanmar 830 MB
Download Mega HD 720p Myanmar 830 MB
Download Megaup FHD 1080p Myanmar 1.3 GB
Download G Drive FHD 1080p Myanmar 1.3 GB